I-Semalt Expert: I-WordPress ye-Glossary Plugins-I-Advice Top
Ukuba isayithi lakho le-WordPress linomxholo omningi kwaye ukhathele ngokuchazwa ngokuphindaphindiweyo kunye nemigqaliselo, kufuneka ufake i-plugin ye-glossary ngokukhawuleza. I-plugin ye-glossary iyakunceda ukuphepha umxholo wokuphindaphinda kwaye ugcina iingcaciso zakho kunye nemigangatho ehleliwe inyanga emva kweenyanga. Ezi iplagi ze-WordPress zikuvumela ukuba uqhagamshele imiqathango yamanqaku akho kwiingcaciso kwi-glossary kwaye ulondoloze ixesha lakho. Iiplagiza zeglosari zinika ithuba lokubonisa imigaqo efanelekileyo kumaphepha ewebhu afanayo kwaye uthathe iindwendwe ukusuka kwelinye iphepha ukuya kwelinye, ukunciphisa izinga lakho lokunciphisa.
Lapha u-Alexander Peresunko, oyingcali ekhokelayo esuka kwi-10 (Semalt , uthethe ngeeplaski zezona zincwadi ezifanelekileyo kunye nezona zicacileyo kwi-WordPress.
1. Ibhokisi le Dictionary
Ngenye yeefowuni ezidumileyo kwi-glossary plugins kubasebenzisi be-WordPress. Ukuba ukhangele ukunika isigama esilungileyo kunye neemeko kwiindwendwe zakho, kufuneka ufakele le plugin kwaye uyenze ukuba isebenze ngokukhawuleza. Ungakwazi ukufikelela kule plugin kwi-Plugins directory ye WordPress yakho kwaye unokutshintsha izicwangciso zayo njengeblogi yakho.
2. Dictionary Click2Refer Virtual Dictionary
Ukuba ufuna ukuhambisa abafundi bakho kumagama ahlukeneyo kunye namaphepha ewebhu, ngokoClick2Refer Virtual Dictionary i-plugin yesigcaziso esifanelekileyo. Unemisebenzi eyahlukeneyo kwaye ingadibaniswa nayiphi na indawo ye-WordPress okanye iblogi. Kuya kukunceda ugcine iindwendwe zibandakanya kwisayithi yakho njengoko izithuba zakho zakhiwe kakuhle kwaye zibukeka zikhulu..
3. Nqakraza ngokukhawuleza Khangela i-Look-up
Le iplagin ye-glossary eyoyiyo kulula ukuyifaka kwaye ikhululeke ngeendleko. Ukuba isebenza ngendlela efanayo negama, libonisa. Emva kokufakela kwaye usebenze le iplagiza yeeplaski kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress, unokukhangela lula umxholo wakho okanye amanqaku kwaye unokuphucula isigama kwi-intanethi. Ufuna nje ukufaka uluhlu lwazo lweglosari kwiphepha ngalinye lewebhu kwaye uqale ukutsala abantu abaninzi nakwiziko lakho, ukwandisa ukuthengisa kwakho kunye nokufumana imali eninzi.
Le iplagin yenza i-interface-friendly friendly isikhombiso sokufumana umxholo we-alfabhethi kunye nezihloko zokuposa. I-plugin ye-glossary iplastiki ayikho iindleko kwaye ingasetyenziselwa kwi-WordPress kunye newebhsayithi zewebhu. Unoluhlu olubanzi lwegama lesiNgesi, imiqathango, izibakala kunye neziqhagamshelo ezikhethiweyo. Inkolelo yamahhala inombolo ekhethiweyo yezinketho, kodwa inguqulo yayo ehlawulelwayo iya kuvula ezininzi iinkqubo kunye nezibonelelo zakho.
5. I-WP igcisa
Ngenye yeefowuni ezidumileyo kunye nezona zincwadi ezidumileyo ze-WordPress abasebenzisi. Oku kwenziwa kwisichazizwi kunye nabathandi be-glossary kwaye kulula ukuyifaka. I-plugin ikunceda ugcine ingqwalasela kunye nokugxilwa kwabafundi bakho abagcinwe ngeenkonzo zabo zamahhala kunye neendlela ezibalaseleyo.
6. Umculi wezandi
Nantsi enye i-glossary kunye ne-plugin yesichazamazwi. Umlobi wachaphazi uvumela abasebenzisi ukuba bahlele umxholo wabo wewebhu baze bafake iifayile kwiiwebhu zonke kumaphepha emizuzu. Awudingi ukwenza nantoni kwikhowudi yakho ye-HTML njengoko le plugin yenza imisebenzi eninzi xa uyifakile ngokupheleleyo. Nangona ayizange ihlaziywe ixesha elithile, iplagin iyakulungela ukuhamba nayo Source .